Guudmarka - Trump Eco Technology Co., Ltd.
Trump Eco Technology Co., Ltd. waa shirkad weyn oo ku hawlan cilmi-baarista, soo-saarka iyo iibinta geosynthetics iyo macromolecule qalabka biyuhu xiraan. Shirkaddu waxay bilawday bixinta xalalka xanibaada biyaha ilaa sanadkii 1983 waxayna bilawday inay soosaarto xaladeeda biyo xireyaasha ah tan iyo sanadkii 2001. Iyadoo la diiwaan galiyay lacag dhan US $ 15million iyo in kabadan 30 sano oo horumar ah, shirkadu waxay leedahay koox cilmi baaris xoog leh, kaabayaasha wax soo saarka horumarsan iyo geedi socodka, adag nidaamyada maaraynta tayada iyo nidaamyada xakamaynta qiimaha sareeya. Dhammaan alaabooyinka waxay si buuxda ugu hoggaansamaan ASTM, GRI, CE iyo heerarka kale ee caalamiga ah.
Waxyaabahan tayada leh badanaa waxaa ka mid ah HDPE geomembrane, xuubka PVC, xuubka TPO, geotextile iyo qalabka kale ee biyuhu xiraan. Wax soo saarkan ayaa si weyn loogu adeegsadaa biyo-saarka, qashin-qubka, macdanta, dhowrista biyaha, dhismaha biyo-gelinta iyo mashaariicda kale ee biyo-gelinta. Waxaan ku dhisnay sumcaddeena waxaanan kasbannay kalsoonida macaamiisheenna annagoo si joogto ah u siinayna waxyaabo tayo sare leh.
Sanadihii la soo dhaafay waxaan dhisnay aqoon wax soo saar heer sare ah. Waxaan awoodnaa inaan kaa caawinno talobixin xirfadeed waxaanan ku siineynaa xalka saxda ah ee mashruucaaga oo lagu hubinayo waqtiga la dhammeeyo.
Bixinta xalalka xireyaasha biyaha ilaa 1983.
In kabadan 15 milyan raasumaal diiwaangashan
Mashaariicdii way dhammaatay
Waxaad la shaqeyneysaa koox xirfadlayaal ah